ဖိုင်နယ်မကန်ခင် လေအရမ်းများထားတဲ့ လီဗာပူးကို တရစ်ချင်းစီရှယ်ပြန်ဖြုတ်နေတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | Duwun
ဗယ်လ်ဗာဒီက ရော်ဘတ်ဆန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကွင်းလယ်ကစားသမား ဗယ်လ်ဗာဒီက ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူး ဘယ်နောက်ခံလူ ရော်ဘတ်ဆန်ကို ထိန်းချုပ်ရတာထက် သူ့သားကို ပြန်လိုက်ထိန်းရတာ ပိုမိုခက်ခဲတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဗယ်လ်ဗာဒီက ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗယ်လ်ဗာဒီရဲ့ ညာခြမ်းမှာ ရော်ဘတ်ဆန် စိတ်ကြိုက်ကစားခွင့်မရရှိခဲ့ဘဲ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗယ်လ်ဗာဒီဟာ ဗီနီရှပ်စ်ရဲ့ တလုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးအတွက်လည်း ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဗယ်လ်ဗာဒီဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ အဓိက ဝှက်ဖဲတချပ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်ခင်မှာ ဗယ်လ်ဗာဒီက ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရဖို့အတွက် သူ့မိန်းမကိုတောင် အလကားပေးနိုင်တယ်လို့ နောက်ပြောင်ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒီစကားက မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်း ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဗယ်လ်ဗာဒီက သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘဝအတွက် ပထမဆုံး ဥရောပချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူ အောင်ပွဲခံနေချိန်မှာတော့ သူ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြိုင်ဘက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗယ်လ်ဗာဒီက “ရော်ဘတ်ဆန်ကို လူကပ်ကစားရတာထက် ကျနော့်သားကို လိုက်ကြည့်နေရတာ ပိုခက်တယ်ဗျာ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဗယ်လ်ဗာဒီ ဒီစကားပြောနေချိန်မှာလည်း သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကို ပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ် တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူ မက်ဒရစ်မြို့ထဲ လှည့်လည်အောင်ပွဲခံတဲ့ အတွေ့အကြုံအပေါ်မှာလည်း ဗယ်လ်ဗာဒီက “အောင်ပွဲခံအခမ်းအနားလား? ကက်စ်မဲရိုးကတော့ ဘယ်လို ဘာညာ ကြိုတော့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ကြုံရတော့ မယုံနိုင်စရာပါ။ နောက်တနေ့ အိပ်ရာနိုးတော့ ကျနော်တကိုယ်လုံး နာကျင်နေပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲလား? တကယ်ကို အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီး မက်ဒရစ်မြို့ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အန်ဒရူးရောဘတ်ဆန် Andrew Robertson